I-Chemistry IiVideos Ukubonisa iMiboniso kunye noVavanyo
IiVideos zeProjekthi zeKhemistry
Lawa mavidiyo e-chemistry abonisa indlela yokwenza iikhemikhali kunye nokwenza imbonakalo epholileyo kunye nezilingo.
Ividiyo yeLava Lampu engeyiyo
Unokwenza isibane sakho se-lava usebenzisa izithako zekhaya ezikhuselekileyo. Anne Helmenstine
Isibane sokuqala se-lava asiyiyo into ongathanda ukuyifaka okanye ukuyivula evulekile njengoko kufuneka udibanise ne-wiring kagesi kunye neekhemikhali ezinobuthi . Ngethamsanqa, unokwenza i-facsimile yesibane se-lava ngaphandle kwengozi ye-electrocution okanye ityhefu. Jonga indlela yokwenza isibane esingekho esinetyhefu esilahlayo. Kaninzi "
I-Salt Crystal Garden VIdeo
Ezi kristali zakhulile zisuka kumxube weengxenye ezilinganayo uMnu. Stewart's Laundry Bluing (okuyi-Prussian eluhlaza okwesibhakabhaka okanye isinyithi (III) ferrocyanide), i-ammonia kunye netyuwa. Anne Helmenstine
Le yindlela yokwenziwa kwekhemikhali eklasi apho iikristali zetyuwa zinyuka kwi-tube bhodi. Jonga ixesha lokukhutshwa kwefoto lokukhula kwekristal. Kaninzi "
Ukuvutha kweViyo yeMithombo yeMentos
Ukuba usebenzisa i-tonic amanzi endaweni yokutya kwe-cola kwaye ukhanyise ukukhanya okumnyama kwibhotile, unokufumana ingqondo ekhanyayo kunye ne-soda geyser. Anne Helmenstine
Ukuba ulahla i- Mentos candies kwi-cola yokutya ufumana umthombo wokudubula wamanzi. Ungasebenzisa olunye utywala ukuze ufumane umthombo wamanzi ovutha ebumnyameni! Kaninzi "
Ividiyo yeMiliksi yeMilk yoMbala
Yongeza amaconsi ambalwa okubala kokutya kwisitya sebisi. Gcoba i-swab yekotoni kwinqwelo yokuhlambalaza kwaye uyidibanise phakathi kweplate. Kwenzekani?. Anne Helmenstine
Yongeza amaconsi okubala kokutya ubisi. Ukuba uthinta ubisi, umnwe wakho ugobile kodwa akukho nto eyenzekayo. Ukuba ungeze isithako semfihlo, ubisi luya kuguqa imibala ngeenxa zonke, njengokungathi imilingo. Kaninzi "
Yonke into oyifunayo ngamanzi, pepper, kunye ne-drop of detergent ukwenza inkohliso yepilisi. Anne Helmenstine
Le vidiyo ibonisa ukuba ungayenza njani i-pepper efihliweyo kumanzi aqhelekileyo ukukhupha eminwe yakho. Le projekthi yindlela enhle yokubonisa imiqondo yeemulsifiers kunye ne-detergents. Kaninzi "
Ividiyo yeDry Crystal Ball
Ukuba uleka ingxowa yamanzi kunye neqhwa elomileyo ngesisombululo se-bubble uzakufumana ibhola elifana ne-crystal ball. Anne Helmenstine
Le vidiyo ibonisa indlela yokusebenzisa isisombululo esomileyo se-ice kunye ne-bulble ukuze wenze 'i- crystal ball ' egciniweyo ezaliswe ngumoya. Kaninzi "
Ividiyo ye-Green Fire Jack-o-Lantern
Sebenzisa umlilo obomvu kwinqaba lakho lase-Halloween. Anne Helmenstine
I-Ordinary Halloween jack-o-lantern yinto enhle kakhulu, kodwa i-jack-o-lantern ezaliswe ngumlilo oluhlaza ngakumbi ngakumbi. Esi sisiphumo esilula ukufezekisa, ukuthembela kwi-chemistry eyisiseko. Kaninzi "
Ixesha le-Alum Crystal Iphutha Ukuphwebula
I-alum crystals zikhethiweyo eziqhelekileyo zikhula ngenxa yokuba isithako sinokuthengwa kwivenkile kunye neekriststu kuphela kuthatha iiyure ezimbalwa ukukhula. Todd Helmenstine
I-alum crystals yizinye zee-crystals ezilula kwaye zikhawuleza ongakhula . Le vidiyo ephulukana nexesha elibonisa ukuba ungalindela ntoni xa ukhula i-alum crystals. Kaninzi "
Jonga iMicrosoft Rocks Ukukhula
I-silicate silicate iyisithako 'seyimfihlo' kwiMicrock Rocks evumela ukuba ukhule ingadi ye-crystal engaphantsi kwamanzi ngelixa ubona. Anne Helmenstine
Bona iMicrosoft Rocks ikhula ngokusebenzisa umlingo wezithombe ezithatha ixesha. Imilambo yamagumbi anamhlanje ikhula ngokukhawuleza kunokuba iMiddle Rocks endala, kunye nemibala ibonakala ibukhali. Le vidiyo igxininisa iiyure ezili-12 zokukhula kwe-crystal ngomzuzu kunye nesiqingatha. Kaninzi "
I-Blue Color Shintsha i-Chem Demo
Ubuluhlaza obuluhlaza beli siphumo kubangelwa kwintsimbi ye-amino-copper eyenzelwe ngokuxuba i-sulfate yethusi kunye ne-ammonia ehluthayo. Anne Helmenstine
Bona indlela yokwenza umbala ohlaza okwesibhakabhaka utshintsho lwamakhemikhali usebenzisa iichiza zamakhaya . Ukuphendula kusuka kumbala ohlaza okwesibhakabhaka ukuya kwi-opaque esibhakabhakeni ukuya kwi-blue blue. Kaninzi "
I-Mood Ring Imibala neentsingiselo
Amanxiwa amaninzi aguquka ukusuka kumnyama ukuya kuluhlaza, aluhlaza kwaye aluhlaza okwesibhakabhaka. Ingqungquthela yomnyama ibonisa ukuba intsimbi ibanda okanye ukuba i-crystals ayiphenduli. Anne Helmenstine
Le vidiyo ihlola indlela amakhondo asemoya asebenze ngayo kunye neyiphi imibala yeemeko eziqhelekileyo kunye nendlela imibala evelele ngayo. Kaninzi "
Ezi ziqhumane eziluhlaza ziveliswa yi-ion i-excited ions xa i-sulfate yethusi yongezwa ekutshiseni utywala. Anne Helmenstine
Funda indlela yokusebenzisa umkhiqizo oqhelekileyo wezethusi ukwenzela ukuvelisa amalangabi ahlaza. Le vidiyo ibonisa ukuba yintoni omele ukwenze kunye noko ukulindele. Kaninzi "
Yenza iblabhu ekhanyayo isebenzisa i-LED kwaye ubukele ibhetri. Anne Helmenstine
Le vidiyo ichaza indlela yokwenza i-crystal ibhola yeqhwa evuthayo ngaphakathi kwii-LED. I-bulb ibha isetyenziswe kwiziphuzo, emithonjeni okanye naphi na oyithandayo. I-bulb yebri inokwenziwa kuyo nayiphi na umbala omnye okanye unokwenza i-multi-colored sphere. Kaninzi "
Umlilo kwiProjekthi ye-Glass
Phalaza amanzi kwisitya esingasondli, ukhanyisa umdlalo phakathi kwesidibanisi uze usigubungele ngeglasi. Amanzi aya kutsalwa kwiglasi. Anne Helmenstine
Le vidiyo yenzululwazi "inkohliso" apho ubeka khona iglasi phezu kwelangatye ehleli kwindawo yokutya kwamanzi. Xa ilangabi liyakucinywa, izinga lamanzi eglasi liphakama ngokungathi ngumlingo. Kaninzi "
Ukutshisa Imali Yevidiyo
Le $ 20 isemlilweni, kodwa ayichithwa ngamatangatye. Uyazi ukuba inkohliso yenziwe njani? Anne Helmenstine
Khanyisa ibhilikhwe yomlilo, kodwa ayiyi kutshisa! Enyanisweni, iya kutshiswa ngaphandle kokuba uyazi ukwenza inkohliso. Le vidiyo ichaza inzululwazi emva kobuqhetseba bemali kunye nokubonisa oko ukulindele. Kaninzi "
Yintoni Evutha Ngaphantsi Kokukhanya Okumnyama? - Ividiyo
Le jellyfish ekhanyayo yinyanga ye-jelly, i-Aurelia aurita. Iiprotheni ezininzi kwi-jellyfish fluoresce okanye zibonakala zikhanya xa zibonakaliswe ekukhanyeni kwe-ultraviolet. UHans Hillewaert
Nanku ukukhangela kwezinye izinto ezivuthayo xa zibonakaliswe ekukhanyeni okumnyama, kubandakanywa izinto eziphilayo kunye nemichiza yamhla ngemihla. Kaninzi "
I-Fire Ball Magic Trick Video
Le vidiyo ibonisa indlela yokwenza umlilo owenzela umlilo opholile ngokwaneleyo ukuze ukwazi ukuwagubha okanye uwasebenzise kwezinye iintlobo zemiboniso yomlilo. Kaninzi "
Iminwe yokubhema Ividiyo
Yenza iminwe yakho ivuthele, njengokungathi imilingo. Nangona kunjalo, kukho inzululwazi emva kwalolu qhinga, kungekhona imilingo. Anne Helmenstine
Jonga indlela yokwenza iminwe yakho ibe ngumsi, ngaphandle komlilo. Kwakhona, ukuba wenza le projekthi ebumnyameni, iminwe yakho iya kutshabalalisa iingubo eziluhlaza. Le vidiyo ibonisa indlela yokwenza iminwe yokutshaya inkohliso . Kaninzi "
Violet Flames Ividiyo
Kulula ukwenza umlilo we-violet. Masibe nomxube wendawo yetyuwa kunye ne-methanol. Anne Helmenstine
Unokufumana ulwazi malunga nekhemistri yekhampani ngombala welililo elivelisa. Le vidiyo ichaza indlela yokusebenzisa iifomasi eziqhelekileyo ze-potassium ukuvelisa ama- flame e-violet . Kaninzi "
Project Crystal Frost Project
Yenza ipeyinti ngefestile ephendulela kwi-crystal frost phambi kwamehlo akho. Anne Helmenstine
Le vidiyo ibonisa indlela yokwenza ipeyinti elula yefenisha eya kuguqa iglasi ngeekristal ezifana neqhwa. Iifoto ziquka ukuhamba kweefoto ezithe xaxa ezikhulayo kwifestile. Kaninzi "
Indlela yokuKhula iAlum Crystals - Ividiyo
I-alum crystals ikhula ngaphakathi kweeyure ezimbalwa. Anne Helmenstine
Esi sifundo sevidiyo sibonisa indlela yokukhulisa zakho iifrifu ze-alum, kunye nefoto yokutshatyalaliswa kwexesha kukubonisa ukuba ungalindela ntoni kwiiyure ezimbalwa zokuqala zokukhula kwe-crystal. Kaninzi "
Funda i-pH yeeKhemikhali eziqhelekileyo
I-Carcinogen Inkcazo - Ziziphi i-carcinogens?
Amaphekula eGalofu eLawulayo ngexesha lokuPhupha
I-Colby College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Ukwazi AbaMantyi baseRoma: Inkcazo
U-Amyloplast: Ziziphi izityalo zokugcina isitatshi
Inkcazo yeNkcazo yokuHlalana kweNkcubeko kwiNkcubeko
I-Fantasy yeBall League League Ideas
Yakha iSicwangciso seKhalenda yeSifundo
Kutheni iLebhanasi-Inyama ephakamileyo ayiyi-Vegan